ZTE wuxuu xaqiijinayaa bilaabida Axon 9 bishaan Ogosto 30 | Androidsis
ZTE horeyba waxay u laheyd soo bandhigida qeybta xigta ee kala duwan oo diyaar ah oo si wanaagsan loo diyaariyay, mobilo noqon doona calanka shirkad shiineys ah oo inbadan balan qaada. Waxaan ka hadleynaa Axon 9, terminal-ka imaan doona Ogosto 30 si uu ula wareego kan Axon 7.
Tan hadda waa la xaqiijiyay oo si rasmi ah ayaa looga mahadceliyay boodhadh ay daabacday shirkaddu, taas oo lagu xusay lambarkan iyo wax kale, wax si weyn loo saadaalinayo oo aan arki karno oo ka sii horreeya saadaasha oo dhan: shabakadda 5G, tikniyoolajiyadda lagu dhex biirin karo qalabkan, sida ay sheegayaan wararka xanta ah iyo mala-awaalku waxay ka yimaadeen tan . Ma sidaas baa?
Markii hore, shirkaddu waxay soo diri jirtay a casuumaada warbaahinta ee IFA 2018 ee magaalada Berlin, Jarmalka, kaas oo dhici doona Ogosto 31 ilaa September 5. Hadda, wuxuu u soo diray casuumaad rasmi ah Dhacdada Axon 9 ayaa bilaabatay Ogosto 30 oo waliba la wadaagay iyada oo loo marayo Weibo, shabakadda bulshada ee Shiinaha. Waxay ku leedahay '9' weyn xarunta oo dhan, oo si cad ugu muuqata Axon 9.
Sawirka ayaa sidoo kale sheegaya shabakadda 5G, isaga oo tilmaamaya taas taleefanka ayaa noqon kara qalab awood u siiya inuu ku taageero, sidii aan si fiican u soo sheegnay. Waxay sidoo kale tilmaami kartaa ogeysiis ama horumarin muhiim ah oo ku jirta qaybtan tan iyo markii calaamaddu ay ka shaqeynaysay tikniyoolajiyadan muddo dheer.
Sida laga soo xigtay xogo kala duwan iyo warar xan ah, ZTE Axon 9 wuxuu la imaan doonaa shaashad dhan 6-inch QuadHD + + oo leh 18: 9 dhinac. Isla mar ahaantaana, waxaa lagu qalabeyn doonaa processor Qualcomm Snapdragon 845, 4 / 6GB oo RAM ah, 64 / 256GB oo ah kaydinta gudaha ah iyo dhammaan faa'iidooyinka nidaamka hawlgalka ee Android 8.1 Oreo.
Warar kale: ZTE wuxuu durbaba tijaabinayaa shabakada 5G
Ugu dambeyntiina, in kasta oo aan la xusin wax kale oo ku jira boodhka la muujiyay, Shirkadda weyn ee Shiinaha ayaa la filayaa inay soo bandhigto nooc cusub oo loo yaqaan 'Blade model', mid ka mid ah taxanayaasheeda ugu caansan ee lagu cusbooneysiin karo carwadan tikniyoolajiyadda muhiimka ah ee durba soo socota.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Xaqiijiyay: ZTE wuxuu soo bandhigi doonaa Axon 9 bisha soo socota ee Ogosto 30
Sida loo soo dejiyo gReader, mid ka mid ah akhristayaasha RSS ee ugu fiican ee laga waayey Google Play Store